Dayuurad ayey qaxootiga ku soo daabulayaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mashruuca #LetThemFly oo la doonayo in qaxootiga dayuurad lagu soo daabulo. Sawwirle: Aleksander Djordjevic/Sveriges Radio
Dayuurad ayey qaxootiga ku soo daabulayaan
La daabacay onsdag 16 september 2015 kl 17.17
Susanne Najafi iyo Emad Zand oo labo maalqabeen oo doonaya in qaxootiga baddaha iyo lugta u soo maraya Yurub u abuuraan dhabe amni ah oo sahlan oo ay ku soo gaari karaan Yurub.
Kadib masawirkii laga faafiyey wiilkii yaraa Alan Kurdi oo asaga ku soo jeeda Yurub doontii siday la degtay ayey go’aansaden in ay abuuraan shirkad duulimaad oo lagu soo daabulo qaxootiga Yurub u soo haajiraya.
– Cunugaas waxuu egyahay sida markaan anniga yaraanka ahaa oo saddex sanno jirka ahaa.
Ayuu yeri Emand Zand ka mid ah shaqsiyadka aas’aasay shirkadda Refugee Air. Ujeedada dadaalkooda waxay tahay in ay muujiyaan in uu jiro dhabo ka sahlan oo ka amni halkii ay isku biimeyn lahaayeen badweynta dhaxe.
Dad la soo duulinayo barafka inta uusan bilaaban
– Labo walaxaato ayaa gacant ku heynaa. Mid ay tahay olale magaciisa yahay #LetThemfly iyo midda kale oo ah duulimaad aynu u baxinay Refugee Air oo aan uga gol leenahay muujinta duulimaad in uu yahay farsad ay dadka cararaya ku soo gaari karaan Yurub, ayuu yeri Emand Zand.
Qorshaha waxuu yahay in ay la galaan heshiis shirkadda duulimaadka SAS oo ay ka kireystaan dayuurad ay ku soo daabulaan qaxootiga ay inta uusan bilaaban barafka xilliga qaboobaha da’a.
Midda maanta ka hortaagan dadyowga qaxootiga ah in ay diyaarad soo raacaan ayaa ah sharuucda EU oo masuuliyad dusha ka saaraysa shrikadaha duulimadka rakaabka ay sidaan xaqa ay u leeyahiin in ay ku socdaalaan guddaha EU. Sida ay hadda tahay shirkad kasta waxaa laga doonayaa qof asta oo ay wado hubiso in uu wato baasabor iyo fiiso sax ah, hadii kale dayuuradda soo qaada ruux aan wadan aqoonsiyo iyo dal ku gal sax ah waxay mutaysanaysaa ganaax qaali ah.
Lakiin sharcigan ayaa quseynin ruuxa xaqa u leh in la siiyo, taas oo markas shirkadda duulimaadka ku qasbaysa in ay isla markiiba goobta ku qiimeyso qof in uu yahay xaq u leh magangeliyo in ay la siiyo iyo inkale.
– Waa fahmi karaan in shirkadda SAS arrintan u aragto arrin dhib badan, ayna culusay ku tahay isla goobta ku qiimeyso ruuxa diyaaradda raaci rabaa in uu yahay mid xaq u leh magangeliyo iyo inkale, laakiin qatar shirkadda arrintan uga imaan karta annaga ayaa dusha u ridaneyna ayuu yeri, waxuuna intaas raaciyey:
– Qatarta iyo ganaaxa waa u qalantaa in loo babac dhigo. Waayo sida ay maanta wax yahiin maalin kasta dad ayaa tahriib ku geeriyoonaya.